हाम्रो समाजमा अधिकांस जोडीको उमेर ज्यादै फरक हुन्छ । केही अपवाद छोडेर सबैजसो जोडीमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम उमेरका नैहुने गर्दछन्। खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला त खोज्छन नै महिलाहरु पनि आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । हालसालै गरिएको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ । सुरक्षित: केटीहरुले आफू भन्दा पाको उमेरका पुरुष खोज्नुका धेरै कारण छन् । यसमा मुख्य कारण हो सुरक्षा । पाको उमेरका पुरुषहरु आर्थिकरुपले पनि बलिया हुन्छन् भन्ने विश्वास हुन्छ । उनीहरुमा जीवनको अनुभव पनि धेरै हुन्छ । पाको उमेरका पुरुषसँग महिलाले सुरक्षित महसुस गर्छन् । समझदारी: महिलाका भावनात्मक कुरा पाको उमेरका पुरुषले बढी बुझ्छन् भन्ने बुझाइ हुन्छ । महिलाहरुको भावना बुझ्न कम उमेरकाले नसक्ने र उनीहरुलाई तारिफ पनि पाका उमेरका पुरुषले गर्ने हुँदा उनीहरुलाई पाका उमेरका पुरुष चाहिन्छ ।कम उमेरका
भनिन्छ, एउटा तस्बिरले हजार शब्द`भन्दा बढी कथा भन्न सक्छ। यस्तै एक तस्बिर यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भा`इरल भइरहेको छ। तस्बिरसँगै यसको क्याप्सन`ले धेरैको ध्यान तानेको छ। पोस्ट गरिएको तस्बिरमा लेखिएको छ- एउटा स्कुलले विद्यार्थीहरुलाई भ्रमणका लागि वृद्धा`श्रम लगेको थियो, जहाँ एउटी छात्राको आफ्नी हजुर`आमालाई भेटिन्। ती छात्राले आफ्ना बाआमासँग हजुरआमाको बारेमा जिज्ञासा राख्दा उनीहरुले आफ्नो नातेदार`कहाँ गएर बस्ने गरेको बता`एका थिए। के यस्तै खाल`को समाज बनाइरहेका छौं हामी? केही स`मय अघि यो तस्बिर यति भाइरल भएको थियो कि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केज`रिवाल र क्रिकेटर हरभजन सिंह`ले समेत आफ्नो फेसबुर र ट्विटर`मा सेयर गरेका छन्। गुजरातका वरिष्ठ फोटो पत्रकार कल्पित भचेचले तस्बिरको कथा यसरी सुनाएका छन् : २००७ सेप्टेम्बर १२ । मेरो जन्मदिनको एकदिन पहिले। म बिहान ९ बजे घरबाट निस्कन लागेको
सामाजिक सञ्जालमा युवा`युवतीहरुको क्रेज बढ्दो छ । युवा युवती हरु मात्र होइन उमेर ढल्की सकेका हरु पनि सामाजि`क सञ्जा`लमा समय बिताउन थालेका छन् । आफ्ना दैनिक जीवनमा भएका हुने गरेका घट|ना तथा विचार पोख्ने गतिलो माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । पछिल्लो समय टिक टक युवा`हरु माझ लोक`प्रिय बनेको छ । के युवा के केटा केटी के वृद्धा सबै जना टिक टक भि`डियो बना|उन लोभि`एका छन् । कतिले त टिक टक मार्फ`त नै आफ्नो करि`यर लाई फिल्मी क्षेत्र तथा मोडलिङ मा स्थापि`त समेत गरेका छन् । यस्ता प्ल्याट फर्म मा राखि`एका कुन भिडियो कुन सम`यमा चर्चित हुन्छन् स्वयं स`र्जक लाई समेत भेउ हुँदैन । टिक टक मा हालि`एका कतिपय भिडियो हरु अन्य सा`माजिक सञ्जाल`मा भाइर`ल बनिर`हेका हुन्छन् । सबै चिजको दुईवटा पाटो हुन्छ, सका`रात्मक र नकारात्मक । त्यसैगरि टिकट|कमा सबै राम्रो कुरा मात्र छ भन्ने पनि होइन । यसको नकारात्मक पाटो
काठमाडौं । ‘मायालुको शहरमा मेरो गाउँमा घर छ’ गीत खुबै चर्चामा रहेको थियो ।गीतमा गाउँ र शहरमा हुने भिन्नता देखाउन खोजिएको थियो । पछिल्ला दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालमा केहि न केहि भाइरल हुने गर्छ । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक तस्विर खुबै चर्चामा रहेको छ । कुल्लु र मनाली, भारतकी तिशा डोगराले एक युवतीको तस्विर साझा गरिन् । तस्विरसँगै क्याप्सन लेखिएको छ, ‘सहरी बालबालिकालाई गाउँमा लैजानुहोस् नत्र यस्तो भइरहनेछ ।’एक युवती गोबरको तस्विर लिइरहेकी छिन् । हजारौंले मन पराएको सो तस्विरमा सयौंको संख्यामा प्रतिकृयाहरु आइरहेका छन् । मञ्जु लेख्छिन्, ‘तपाईंका अनुसार सहरमा गाईको गोबरबारे जानकार हुँदैनन् ।सहरका बालबालिका गाईको गोबरप्रति पूर्णतया अनभिज्ञ छन् किनभने शहरमा गाई गोबर गर्दैन् ।’ एक आमा लेख्छिन्, ‘साँचो, केटाकेटी हुर्काउनको लागि एउटा गाउँ चाहिन्छ ।रमाइलो एक ठाउँमा, जब मैले मेरा बच्चाहरूलाई मेरो
युवामाझ मोटरसाइकल मोह अधिक छ । मोटरसाइकलमा हुइँकिनु युवाको सोख हुन्छ । तर सबै युवाले मोटरसाइकल चलाउन जानेका हुन्छन् भन्ने छैन । भौगो`लिक संरचना तथा आर्थिक अवस्थाका कारण युवाको मोटरसाइकल चढ्ने सपना पूरा नभएको हुनसक्छ । मोटरसाइकल आवश्यकता तथा सोख`को साधन हो । दुईपांग्रे सवारीले सजिलै जाम छिचोल्न सकिने भएकाले युवाको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । मोटर`साइकल रहर तथा सोखले मात्र चलाउन सकिँदैन । मोटर|साइकल खत`रनाक सवारी पनि हो । त्यसैले मोटरसाइकल चलाउन केही कुरामा विशेष ध्या`न दिनु आवश्यक हुन्छ । मोटर`साइकल चलाउँदा विभिन्न कु`रामा ध्यान दिन सकेनौ भने ठूलो दु`र्घ`टना हुने खतरा पनि रहन्छ । मोटरसाइकल चलाउँदा समान्य ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू : मानसिक रूपले तयार- मोटरसाइकल चलाउन सबैभन्दा पहिले मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ । मोटर`साइकल शरीर र दिमागको माध्यमबाट चलाइन्छ । दिमाग र शरीर`को सही संयोजन भएमा
ब्रास अगेंस्ट ब्या’ण्डकी चर्चित गायिका सोफिया उरिस्ता आफ्नो एक ह’र्कतका कारण पछिल्लो समय वि’वादमा ता’निएकी छन्। आफ्नो उक्त ह’र्कतका लागि उरिस्ताले मा’फी पनि मागेकी छन्। उनको ब्याण्ड ब्रास अ’गेंस्टले पनि यो प्रकरणमा मा’फी मागेको छ। तर, सोसल मिडियामा यो प्रकरणलाई लिएर अझै पनि आ’लोचना जारी छ। ११ नोभेम्बरमा आफ्नो एक लाइभ क’न्सर्टमा उ’रिस्ताले एक पुरुष प्रशंसकलाई स्टेजमा बोलाइन् र उ’त्तानो प’रेर प’ल्टिन् भनिन्। त्यसपछि उनले ती पुरुष प्रशंसकको मुखमा पि’साब गरिदिइन्। उरिस्ताले पुरुष प्रशंसकको अनुहारमा पि’साब गरेको भिडियो तीब्र रुपमा भाइरल भयो। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा उरिस्ता र उनको ब्या’ण्डको धेरै आ’लोचना भयो। आ’लोचनापछि उ’रिस्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत मा’फी मा’ग्दै आफ्नो उक्त ह’र्कत सही नभएको स्वी’कार गरेकी छन्। स्टेजमा आफू जहिले पनि ‘लि’मिट’ रहने गरेको बताउँदै उ’रिस्ताले त्यस दिनको आफ
काठमाडौं। ब्राजिलमा एक महिला आफ्ना श्रीमानलाई कुकुरजस्तै बाँ’धेर डो’र्याउँदै सडकमा घुमि रहेकी देखिइन् । यी महिलाका तस्वीरहरु सामाजिक संजालमा भा’इरल भएपछि मानिसहरु अचम्ममा परे । महिलाले आफ्ना श्रीमानलाई एउटा चे’नले घाँ’टीमा कु’कुरझैं बाँ’धेर डो’र्याइरहेकी थिइन् । यी महिलाले आफूले यस्तो गर्नुको कारणबारे जे तर्क गरेकी छिन् त्यो पनि निकै रोचक छ । डेलीस्टारको रिपोर्ट अनुसार यी महिलाको नाम लुआना कजाकी हो र उनका पतिको नाम आर्थर ओ उर्सो हो । यी दुई ब्राजिलको एक भिडभाड युक्त रेलवे स्टेशन र सडकमा घुम्दै फोटो खिचाइ रहेका देखिएका थिए । फोटोमा देख्न सकिन्छ कि कसरी लुआनाले आफ्ना पति आर्थरलाई कुनै कु’कुरलाई जस्तै व्य’वहार गरिरहेकी छिन् । आर्थरको घाँटीमा एउटा फलामको चेन थियो जुन चेन लुआनाले समाइरहेकी थिइन् । लुआनाले त्यही चे’न समातेर आर्थरलाईै डोर्याउँदै घुमाइरहेकी थियन् । आर्थरको अनुहारमा एउटा म
अहिलेको समयमा हरेक आमा’बाबुहरु आफ्ना सन्तानका लागि पर्याप्त समय दिदैनन् । आफ्नो काममा व्यस्त रहने आमा’बाबुले सन्तानलाई समय दिन सकिरहका हुँदैनन् । यो बीचमा भार’तको उत्तर प्रदेशको बरेली जिल्लामा एउटा अचम्मको घटना सार्वजनिक भएको छ । भारतीय सञ्चा’रमाध्यमहरुका अनुसार एक बच्चाले खेल्दाखेल्दै जिउँदो सर्प निले’का छन् । भारतको चर्चित अखबार टाइम्स अफ इन्डियाको अनला’इन संस्कर’णमा आएको समाचार अनुसार बच्चाकी आमाले आफ्नो छोराको मुखभित्र केही वस्तु देखेपछि हतप’त हेरिन् । जब उनले त्यो वस्तुला:ई बाहिर निकालिन् तब उक्त वस्तु स’र्प बच्चा भएको थाहा पाइन् । उनले छोरालाई तत्का:ल अस्पताल पुर्याइन् । बच्चाका पिता धर्म’पाल एक किसान हुन् । उनी आफ्ना एक वर्षका छोरा देभेन्द्र र ६ इन्च लामो मरेको सर्पको बच्चा लिएर अस्प’ताल पुगे । धर्मपालले इमर्जेन्सी स्वास्थ्य अधि’कारी डा. हरिश चन्द्रलाई उनको छोराले सर्प निले
बिहेमा केटी पक्षले दुला`हाको जुत्ता लुकाउने, दुला`हाले केही रकम दिने र केटी पक्ष बिशेषत दुला`हाका साली`हरुले जुत्ता फिर्ता दिने हिन्दु बिवाहमा एक चलन हो । तर यस्तो चलनका कारण बिहे नै भाँ`डिएको छ भने दुुलाहा प्रहरी चौकी पुुगेका छन् । यो घटना भारतको हो । त्यहाँ उत्तर प्रदेशको मुजफ्फर`नगरमा रहेको सि`सौली गाउँमा उक्त घटना भएको हो । त्यहाँ के भयो भने त्यहाँ एउटा वि`वाह समा`रोह हुने थियो । दुलहीले जन्ती ल्याए । अब समा`चार यो छ कि दुलाहा आफ्नै विवाह`बाट खाली हात फर्केका थिए। जन्ती सहित गएका दुलहाले केटीको पक्षमा केही महिला`हरूसँग नराम्रो ब्यवहार गरे । त्यस`पछि उनी दुलही लिएर होइन, उनलाई लिन प्रहरी चाँही आए । कुरा बिग्रिन सुरु भयो जब चलेको चलन`का कारण, त्यहाँ जुत्ता लुकाउने विधि थियो । केटी`हरूले दुलहाका जु`त्ता लुकाए । अब यस्तो हुन्छ कि दुल`हाले पैसा नदिएसम्म उसको जुत्ता फिर्ता हुँदैन । ठ्य